Kulan Daraasaad Heer Caalami ah oo Lagu Darsayay Hanaanka Geedi-Socodka Maaraynta Maamulka Maaliyadaha oo Maanta ka Dhacay Hotel Nogob ee Magaalada Jigjiga. - Cakaara News
Jigjiga(CN) Talaado Oct 21,2014.Waxaa maanta ka furmay hoolka shirarka Nogob Hotel kulan lagu gorfaynayay daraasaad heer caalami ah, oo ay soo sameeyaan Qaar ka mida hay'adaha deeq-bixiyayaasha caalamka ee loogu yeedho( PEFA) iyo xafiiska maaliyada iyo horumarinta Dhaqaalaha DDSI oo iskaashanaya uu xafiiska maaliyada deegaanku soo diyaariyay dearaaasada isticmaalka iyo maamulka maarayna maaliyada. islamarkaana uu soo diyaarintiisa leeyay xafiiska maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha DDSI.
Kulankan ayaa waxaa maanta ka soo qaybgalay masuuliyiinta xafiiska maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha DDSI oo ay ka mid yihiin wasiirka maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha DDSI mudane Ahmed Cabdi maxamed, wasiir ku xigeenka maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha, DDSI mudane Jamaal Faarax Warmoge, masuuliyiin ka socotay xafiisyada horumarinta ee deegaanka oo ay ka mid yihiin xafiiska caafimaadka, waxbarashada, beeraha, biyaha, iyo waliba xafiiska hantidhawrka guud ee DDSI.
Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay kulankan masuuliyiin ka socoday wasaarada maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha JDFI iyo masuuliyiin ka socoday ha’yadaha deeq bixiyayaasha aduunka oo uu ka mid yahay uqaabilsanaha hayadaha deeqbixiyayaasha aduunka ee dhinaca maaliyadaha.
Kulankan ayaa waxaa ugu horayntii furitaankiisii ka hadlay wasiirka maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha DDSI mudane ahmed cabdi maxamed oo siwayn u soo dhaweeyay masuuliyiinta ka socotay wasaarada maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha ee heer federal, kuwa ka socda ha’yadaha deeq bixiyayaasha, bangiga aduunka xubnaha daraasaadka ku samaynaya hanaanka maamulka maaliyadeed ee deegaanka( PEFA) iyo masuuliyiinta kale oo ka soo qaybgashay kulankaa.
Wuxuuna wasiirku si qoto dheer uga waramay barnaamijka maamulka iyo ilaalinta maaliyadaha( expenditure management and control programme) oo hada ka hor lagu maalgaliyay hirgalint dib u habaynta dhamaan hanaanka maamulka maaliyadeed ee deegaanka iyo taageeradii aan hagrashada lahayn ee ina siin jireen wasaarada maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha JDFI ee horumarinta dhaqaalaha si guulo looga soo hooyo yoolka iyo horumarinta maamulka maaliyadaha sidoo kale waxa uu wasiirku sheegay in guulo wax ku ool ah uu deegaanka ka soo hooyay hada dhinaca maamulka maaliyadaha ee deegaanka.
Dhanka kale wasiir ku xigeenka maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha mudane DDSI mudane Jamaal faarax warmoge ayaa ka warbixiyay daraasaadka iyo hanaanka geedi socodka maamulka maaliyadaha oo ah buu yidhi mid ku salaysan xogaha dhabta iyo macluumaadka laga helay xafiisyada ay khusayso daraasaadkani ee heer deegaan.
Haddaba daraasaadkan lagu darsayay nidaamka hanaanka geedi-socodka ee maamulka maaliyadaha waa mid halbeeg heer caalamiya kaasi oo lagu lafaguro qaybaha kala ah meertada miisaaniyadaha ee dhinacyada qorshaynta miisaaniyadeed,isticmaalka miisaaniyada kharash-bixinta, nidaamka xisaabaadka, ilaalinta iyo hantidhawrka gudaha oo ah mid loo adeegsado halbeeg caalami (indicators) laguna cabiro heerka uu gaadhsiisan yahay maamulka maaliyaduhu ayaa uu guulo waawayn ka soo hoyay xukuumada deegaanku.
Kulankan daraasaadka ah ayaa socondoona mudo 2 maalmood ah. Iyada oo uu maanta xafiiska maaliyada iyo horumarinta dhaqaaluhu ugu samaayey masuuliyiintan qado sharafeed iska huteelka Nogob